LibreOffice मा साधारण सर्टकट कुञ्जीहरू
सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गर्दा
तपाईँको अनुप्रयोग सञ्चालन गरिरहेको बेलामा,सबै जसो उपलब्ध सञ्चालनहरूका लागि तपाईँले माउस प्रयोग वा कुञ्जीपाटी बीचमा रोज्न सक्नुहुन्छ।
नियन्त्रण संवादहरूलाई सर्टकट कुञ्जी प्रयोग गर्दा
माउस कार्यहरूका लागि सर्टकट कुञ्जी
If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, CommandCtrl and occasionally OptionAlt to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable. यो प्रकार्यको उपलब्धता तपाईँंको सञ्झ्याल प्रबन्धकमा भर पर्दछ।
अभ्यासिक पाठ आगत फाँटहरू
तपाईँले एउटा प्रसङ्ग मेनु खोल्न सक्नुहुन्छ,जस्मा धेरै जसो-प्रयोग हुने आदेशहरू समाविष्ट हुन्छन।
एउटा शब्द चयन गर्नका लागि यसलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस।
पाठ आगतमा तीन पटक क्लिक गर्दा पूरै फाँट चयन गर्दछ। कागजातमा तीन पटक क्लिक गर्दा हालको वाक्य चयन गर्दछ।
तान्नुहोस-र-छाड्नुहोस एउटा पाठ बाकसको बाहिर पट्टी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
म्याक्रोहरू रोकावट गर्दा
LibreOffice मा साधारण सर्टकट कुञ्जीहरूको सूची
कार्य वा संवाद विच्छेद गराउँदछ। यदि LibreOffice मद्दतमा भएमा: एक तह माथि जान्छ.
फोकस गरिएको जाँच बाकसलाई एउटा संवादमा टगल गर्दछ।
एउटा संवादको एउटा विकल्प चयनमा सक्रिय नियन्त्रण फाँट परिवर्तन गर्दछ।
अर्को चयन वा तत्वलाई एउटा संवादमा फोकस अग्रिम गर्दछ।
एउटा संवादमा पहिलेको चयन वा तत्वमा फोकस सर्दछ।
विकल्प Alt+तल बाँण
आदेश Ctrl + O
एउटा कागजात खोल्दछ।
आदेश Ctrl + S
हालको कागजात बचत गर्दछ।
आदेश Ctrl + N
एउटा नयाँ कागजात सिर्जना गर्दछ।
आदेश Ctrl + P
कागजात मुद्रण गर्दछ।
फेला पार्नुहोस र बदल्नुहोस संवाद बोलाउँदछ।
अन्तिम पटक प्रविष्टि गरिएको खोजी सर्त खोजी गर्दछ ।
कागजात दृश्य पुन: कोर्दछ।
LibreOffice मद्दतमा:मुख्य मद्दत पृष्ठमा उफ्रन्छ।
अघिल्लो सहायक सञ्झ्यालमा फोकस सेट गर्दछ।
प्रसंग मेनु खोल्दछ ।
आदेश Ctrl+F4 वा विकल्प Alt+F4
आदेश Ctrl + Q
अनुप्रयोगबाट निस्कन्छ ।
हेडरको सुरुमा अवस्थित गरिँदा, एउटा ट्याब घुसाइन्छ ।
(यदि एउटा OLE वस्तु चयन गरिएमा) प्रविष्ट गर्नुहोस्
चयन गरिएका OLE वस्तु सक्रिय पार्दछ।
(यदि एउटा रेखाचित्र वस्तु वा पाठ वस्तु चयन गरिएमा) प्रविष्ट गर्नुहोस्
पाठ आगत मोड सक्रिय पार्दछ।
आदेश Ctrl + X
चयन गरिएका तत्वहरूलाई काट्दछ।
आदेश Ctrl + C
चयन गरिएका वस्तुहरू प्रतिलिपि गर्दछ।
आदेश Ctrl + V
आदेश Ctrl + Shift + V
विशेष तरीकाले टाँस्नुहोस संवाद खोल्दछ।
आदेश Ctrl + A
सबै चयन गर्दछ ।
आदेश Ctrl + Z
अन्तिम कार्यलाई पूर्वस्थितिमा फर्काउँदछ।
आदेश Ctrl + Y
अन्तिम कार्यलाई रिडु गर्दछ।
सङ्ग्रहालयमा सर्टकट कुञ्जीहरू
क्षेत्रहरूको बीचमा सर्दछ.
चयनलाई एक माथि सर्दछ।
चयनलाई तल सर्दछ।
आदेश Ctrl+प्रविष्ट गर्नुहोस्
एउटा प्रसङ्ग मेनु खोल्दछ।
चयन गरिएका विषयवस्तु ताजा गर्दछ।
शीर्षक प्रविष्ट संवाद खोल्दछ ।
चयन गरिएको विषयवस्तु मेट्दछ।
पहिलो प्रविष्टिमा उफ्रन्छ।
अन्तिम प्रविष्टिमा उफ्रन्छ।
बायाँतिर पछिल्लो सङ्ग्रहालय तत्व चयन गर्दछ।
दायाँतिर पछिल्लो सङ्ग्रहालय तत्व चयन गर्दछ।
माथि पछिल्लो सङ्ग्रहालय तत्व चयन गर्दछ।
तल पछिल्लो सङ्ग्रहालय तत्व चयन गर्दछ।
चयन गरिएको वस्तु लाई लिङ्क गरिएको वस्तुको रूपमा हालको कागजात भित्र घुसाउँदछ।
हालको कागजातमा चयन गरिएको कागजातको प्रतिलिपि घुसाउँदछ।
विषयवस्तु दृश्य र वस्तु दृश्य बीचमा स्विच गर्दछ ।
मुख्य सिंहावलोकनमा फेरि स्विच गर्दछ।
पङ्क्ति सम्पादन मोडमा हुँदा बाहेक, पङ्क्ति चयन टगल गर्दछ।
रेखाचित्र वस्तुहरूका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू
एउटा रेखाचित्र वस्तु घुसाउँदछ।
एउटा रेखाचित्र वस्तु चयन गर्दछ।
अर्को रेखाचित्र वस्तु चयन गर्दछ।
पहिलेको रेखाचित्र वस्तु चयन गर्दछ।
पहिलो रेखाचित्र वस्तु चयन गर्दछ।
अन्तिम रेखाचित्र वस्तु चयन गर्दछ।
रेखाचित्र वस्तु चयन अन्त्य गर्दछ।
Esc (ह्याण्डल चयन मोडमा)
विकल्प Alt+माथि/तल/बायाँ/दायाँ बाँण
चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुका लागि बिन्दु चयन सक्रिय पार्दछ।
चयन गरिएका बिन्दुहरू प्रति सेकेण्ड एक पटक झम्किन्छन।
हालको दृश्यको केन्द्रमा पूर्वनिर्धारित साइज सँगको एउटा नयाँ रेखाचित्र वस्तु राखिएको छ।
कागजातमा पहिलो रेखाचित्र वस्तु सक्रिय पार्दछ।
कुनै पाठ वा सङ्ख्यात्मक कुञ्जी
यदि एउटा रेखाचित्र वस्तु चयन गरिन्छ भने, रेखाचित्र वस्तुमा सम्पादन मोडमा स्विच गर्दछ र कर्सरलाई पाठको अन्त्यमा राख्दछ। एउटा मुद्रणयोग्य क्यारेक्टर घुसाइन्छ.
Title is: $[officename] मा साधारण सर्टकट कुञ्जीहरू